XCMG qodista XE235C Qaab dhismeedka guud iyo qeybinta xamuulka dariiqyada waa kuwo caqli gal ah si loo gaaro xasiloonida safarka oo wanaagsan iyo xawaaraha ugu badan ee safarka waa ilaa 40km / h si loo ogaado xawaaraha wareejinta goobta ee deg degga ah.
Fasalka motor XCMG
Fasalka matoorrada 'XCMG motor' wuxuu qaataa Dongfeng Cummins 6BTA5.9-C180-II matoor naafto ah oo turbocharged ah, kaas oo leh xamuul wax soo saar oo ballaaran iyo isugeyn awood koronto iyo isticmaalka shidaalka oo hooseeya.
XCMG rullaluistemadka wadada
Minyan marwalba way ilaalisaa falsafada adeegga "Ku Soco Caqiidada, Ballan Qaad Ballanka, Diirada Saaxiibka Macaamiisha", nafteena u hur waxa macaamiisha u baahan tahay, oo u soo saar alaab iyo adeeg waxqabad sare iyo qiimo wanaagsan.
Wiish XCMG wiish xamuul ah
Sideed farsamooyin patent ah ayaa xaqiijinaya habsami, hufnaan sare iyo ilaalinta tamarta qaadista, wareegga, iyo nidaamyada luffing.
XCMG loader wiish
Culays culus oo loogu talagalay xaaladda dhagxaanta; qalabka shaqada iyo hore iyo gadaal jir qoreysa guddiga qaro weyn oo xoog sare, qaybinta macquul ah iyo awood xambaarsan xoog.